Le ngxaki ingaqondwa yiyiphi na yethu. Ngamanye amaxesha nabantwana abancinci banokukhathazeka ngoku. Oogqirha bavakalisa ngokuqinisekileyo ukuba imbangela ebalulekileyo yesifo ayimpofu yokucoceka ngomlomo kunye nokuphila okungenampilo. Kodwa ngaba kunjalo? Kwaye ukuba kunjalo, ngoko kufuneka wenze ntoni ukuphepha le nto? Ngoko, ukuvuvukala kweentlobo: iimpawu, unyango - isihloko sesingxoxo namhlanje.
Sisiphi isifo segum?
I-Parodontosis yesibini isifo esiqhelekileyo sesigxobo somlomo emva kokucima. Esi sifo sichaphazela bonke abantu abangaphezu kweminyaka engama-30, nangona abatsha baninzi baninzi behlulwa zizifo ze-periodontal. I-Parodontosis ayikho kuphela isifo sezinyo. Inxulumene nezifo ze-cardiovascular, endocrine kunye ne-system ye-nervous.
Izibonakaliso zeso sifo
Esi sifo sikhula kwizigaba eziliqela. Ekuqaleni kukho ukutshisa, ukutshisa, ubomvu nokukhwaza kwizinsini. Emva koko, iinjongo zikhula, zivule, i-pus iqala ukuqokelela kunye neentsumama ziqala ukuphuma. Kwezinye iimeko, iinjongo ziba nzima kunezona ziqhelekileyo. I-parodontosis idla ngokuhamba kunye nephunga elimnandi eliphuma emlonyeni kunye nokubunjwa kwexesha lokubambisa (i-secretion of pus). Ukuvuvukala kweentsholongwane kunye neebhaktheriya eziphindaphinda emlonyeni - konke oku kunokukhokelela ekuvukeleni kweelymode.
Isigaba sokugqibela sesi sifo xa amazinyo aqala ukuphuma ngenxa ye-atrophy ye-gum. Ezibizwa ngokuthi "iipokethi" zenziwa phakathi kwegum kunye nodonga lwezinyo. Bafumana ama-microorganisms kunye nokutya kwenkunkuma, okukhokelela ekukhayeni ngokukhawuleza kunye nokulahlekelwa kwezinyo. Into embi kakhulu yile nto kukuba amazinyo aphilileyo, kwaye angakwazi ukukhonza umnini wabo ixesha elide. Ukuvuvukala kusasazeka kumhlathi. Kwaye kamva, ukuba awuthathi amanyathelo okufika ngexesha, kunokukhokelela ekugqithweni kwamathambo egazi kunye nezinye iingxaki ezinkulu.
Kwakhona, iingxaki zamazinyo zikhokelela kwiingxaki zesistim sokutya (i-gastritis, i-colitis, izilonda, njl.). Ukungonakaliswa kweentliziyo, iintso, isibindi kunye nokuvela kwezinye izifo ezinxulumene nezifo ze-periodontal.
Izizathu zokuvuvukala kweentlobo
Kukho izinto ezininzi ezibangela esi sifo. Ukungabikho kwamavithamini, ukungabikho kococeko lomlomo olufanelekileyo, indlela yokuphila engafanelekanga, indawo engafanelekanga yamazinyo kunye nobukho bendawo eninzi phakathi kwazo zizinye zezizathu zezifo ze-periodontal. Kukho izidalwa zokuzalwa kwezi sifo. Umngcipheko wesi sifo ngowona mkhulu kubasetyhini abakhulelweyo, abantu abanesifo sikashukela kunye nabantu abanomlenze ongalunganga.
Unyango lwezifo zentsholongwane yinkqubo eyinkimbinkimbi kunye neyodwa. Ukuzaliswa ngokupheleleyo kungabangelwa yimigudu ehlangeneyo yophila, i-endocrinologist, i-neuropathologist.
Ekuqaleni, unyango luyilo, umlomo womlomo. Ukunyangwa kwesifo segum kubonakala ekukhutshweni kwebala kunye neartarart. Oogqirha bancomela kunye nokuzaliswa komzimba ngamavithamini, ukungabikho kwezona zinto ziphambili ekuphuhlisweni kwezifo ze-periodontal . Kwakhona kuyimfuneko kunye nesondlo esifanelekileyo kwiivithamini kunye neemaminerali, kwakunye nokugcina impilo ephilileyo. Kwizigaba zokugqibela zesifo se-gum, unyango luquka ukuhlinzwa ukulungisa amazinyo athenjwayo okanye amazinyo amaninzi ngokulungisa i-occlusion.
Unyango olwenziwe ngamayeza asebenzayo lusebenza ngempumelelo kuphela. Iimpawu ziyabhubha okwethutyana, kodwa kwakhona ziyavela kwakhona, kwaye imeko yezinsini kunye namazinyo iyadabukisa.
Ukuthintela isifo segum
Ukuze ugweme ukuvuvukala kweentlobo, iimpawu esele siphephe ngazo, kubalulekile ukulandela imithetho elula. Iingcaphephe zincoma ukuba ufanele uqhube amazinyo akho kusasa nangokuhlwa, kwaye mhlawumbi emva kwesidlo ngasinye. Oku kuyimfuneko ukucoca iingqimba zangaphakathi zezinsini kumacala omabini. Ukuba awunayo ibhulosi yamazinyo, uhlambulula iifama zakho ngephepha, i-gauze, nokuba iminwe yakho okanye ulwimi lwakho. Ukongeza, kufuneka uzame ukuhlafuna ukutya okuqinileyo. Ukwenza ukukhangela kwenziwa ngcono ukujikeleza kwegazi, kukhuthaza ukuhlambulula umlomo kwaye kuyimfuneko yezinsini kunye namazinyo enempilo.
Unyango lwee-tumors eziphathekayo kunye namakhowe
Iindlela ezifanelekileyo zokulungisa izifo zentliziyo
Oko kufuneka uyenze yonke imihla ukugcina impilo yakho
Iimpazamo zophando lweplastiki
Ukuphulukisa kunye nemilingo ye-agate
Ukunyangwa kokutyhelwa kokutya, isifo somhlaza
I-Recipe ye-calori ephezulu, kodwa idada enomtsalane, ebhaka kwi-sleeve
Iimodyuli zezandla ze-origami
Khetha umlingane ngesignali yakhe yezodiac
I-Autumn Pred Drink
Indlela yokubeka umntwana obuthongayo
Indlela yokulahleka isisindo ezandleni
Ukudansa ekulweni ne-cellulite
Iintsuku eziphumeleleyo zokuphumelela iLotter ngoDisemba 2017 kuzo zonke iimpawu ze-zodiac
I sweatshi yamadoda eneenaliti zokudibanisa
Ukwandiswa kwegesi kwisisu nasemathumbu
Umculi uYury Yakovlev, i-biography
Iimveliso ezikhuthaza ukuveliswa kwe-collagen
Ngaba ufuna ukutshata nomhlobo? Yintoni enokuyenza kunye nendlela yokuziphatha ngayo